ခဈြသူမြားရှိနပွေီလားလို့ ပရိသတျတှရေဲ့ အထငျခံနရေတဲ့ သရုပျဆောငျဖှေးဖှေးရဲ့ စာလေးတဈစောငျ – Shwe Likes
အနုပ ညာလောက မှာ ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယိုဇာ တျကောငျးေ ပါငျးမြားစှာကို ကရြာဇာတျရု ပျတိုငျးမှာ ပီပွငျပိုငျ နိုငျစှာသရုပျဆောငျ နိုငျတဲ့အ တှကျ အ ကယျဒမီထူး ခြှနျဆုကွီးကို ထိုကျထိုကျ ရရှိခဲ့တဲ့ ပရိတျသတျေ တှရဲ့
အခဈြေ တျာမငျး သမီးခြောလေးေ ဖှးဖှေးဟာ ဆိုရငျ အောငျမွ ငျမှုတှနေဲ့ အနုပညာ လမျွးေ ကာငျးမှာ ‌အောငျမွငျလာ ခဲ့တာ ယနထေိ့တိုငျပါပဲနျော အခုလ ကျရှိဖွဈပျေါေ နတဲ့ နိုငျငံရေးအခွေ အနတှေမှောဆိုရ ငျလညျး ဖှေးဖှေးကွ ပညျသူလူထုနဲ့တဈ သားတညျး ရပျတညျခဲ့တာ ပဲဖွဈပါတယျ.။
အခုတဈ ခါမှာဆို ရငျလဲ သရုပျဆော ငျဖှေးဖှေးက ” “ As For me ရညျရှညျ သှားခြ ငျတယျဆိုရငျ ရိုးသားစဈမှနျခွငျး လိုတယျ”🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍✨✨✨✨✨ ကိုယျ့အပျေါ Loyal မဖွဈရငျ သူငယျခငျြးဖွဈဖွဈ ရညျးစားဖွဈဖွဈ နောကျဆုံးကု နျကုနျပွောရ ရငျမိ သားစုဆှေ မြိုးပဲဖွဈဖွဈ
ဘာကွီးပွဲ ဖဈေ နနေ ဘယျလိုမှ Life Journey မှာ အဖျောအဖွ ဈချေါသှားဖို့မဖွဈ နိုငျဘူး…ကိုယျ့အတှကျ တကယျအေ ရးပါသူ ခဈြရသူ ဘေးမှာရှိေ စခငျြသူတှေ အပျေါ ရိုးသားစဈမှနျ ပွရငျး တနျဖိုးထား နိုငျကွပါစေ… #ဖှေးဖှေး” 🎄🍀🌿🕊🕊ဆိုပွီးရေး သားလာ ခဲ့ပါတယျ.
သူမ ရေးသားလာ ခဲ့တဲ့ ပို့ဈအောကျမှာတော့ ပရိသတျေ တှက ခဈြသူမြားရှိနေ ပွီလားဆိုပွီး ကောမနျ့တှနေဲ့ မေး ထားခဲ့ကွပါ တယျ။ သူမ ရေးလာတဲ့ စာသားက လဲ ခဈြသူအ တှကျကို ရညျရှယျတယျလို့လညျး ထငျယောငျထငျမှားေ လးလညျး ဖွဈစတောေ ကွာငျ့ . ပရိသတျကွီးလညျး ဖှေးဖှေးက ဘယျသူ့ကို ရညျရှယျတ ယျဆိုတာလညျး ခနျ့မှနျးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော… Source: Shwe Yee Ko Oo
အနုပ ညာလောက မှာ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာ တ်ကောင်းေ ပါင်းများစွာကို ကျရာဇာတ်ရု ပ်တိုင်းမှာ ပီပြင်ပိုင် နိုင်စွာသရုပ်ဆောင် နိုင်တဲ့အ တွက် အ ကယ်ဒမီထူး ချွန်ဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက် ရရှိခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်ေ တွရဲ့
အချစ်ေ တ်ာမင်း သမီးချောလေးေ ဖွးဖွေးဟာ ဆိုရင် အောင်မြ င်မှုတွေနဲ့ အနုပညာ လမ်ြးေ ကာင်းမှာ ‌အောင်မြင်လာ ခဲ့တာ ယနေ့ထိတိုင်ပါပဲနော် အခုလ က်ရှိဖြစ်ပေါ်ေ နတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေ အနေတွေမှာဆိုရ င်လည်း ဖွေးဖွေးကြ ပည်သူလူထုနဲ့တစ် သားတည်း ရပ်တည်ခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်.။
အခုတစ် ခါမှာဆို ရင်လဲ သရုပ်ဆော င်ဖွေးဖွေးက ” “ As For me ရည်ရှည် သွားချ င်တယ်ဆိုရင် ရိုးသားစစ်မှန်ခြင်း လိုတယ်”🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍✨✨✨✨✨ ကိုယ့်အပေါ် Loyal မဖြစ်ရင် သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ် ရည်းစားဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးကု န်ကုန်ပြောရ ရင်မိ သားစုဆွေ မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်
ဘာကြီးပြဲ ဖစ်ေ နနေ ဘယ်လိုမှ Life Journey မှာ အဖော်အဖြ စ်ခေါ်သွားဖို့မဖြစ် နိုင်ဘူး…ကိုယ့်အတွက် တကယ်အေ ရးပါသူ ချစ်ရသူ ဘေးမှာရှိေ စချင်သူတွေ အပေါ် ရိုးသားစစ်မှန် ပြရင်း တန်ဖိုးထား နိုင်ကြပါစေ… #ဖွေးဖွေး” 🎄🍀🌿🕊🕊ဆိုပြီးရေး သားလာ ခဲ့ပါတယ်.
သူမ ရေးသားလာ ခဲ့တဲ့ ပို့စ်အောက်မှာတော့ ပရိသတ်ေ တွက ချစ်သူများရှိနေ ပြီလားဆိုပြီး ကောမန့်တွေနဲ့ မေး ထားခဲ့ကြပါ တယ်။ သူမ ရေးလာတဲ့ စာသားက လဲ ချစ်သူအ တွက်ကို ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်း ထင်ယောင်ထင်မှားေ လးလည်း ဖြစ်စေတာေ ကြာင့် . ပရိသတ်ကြီးလည်း ဖွေးဖွေးက ဘယ်သူ့ကို ရည်ရွယ်တ ယ်ဆိုတာလည်း ခန့်မှန်းပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်… Source: Shwe Yee Ko Oo
ပုဒျမ ၅၀၅ (က) နဲ့ နအေိမျ မှာ ဖမျးဆီးခွငျး ခံခဲ့ရတဲ့ ဒါရိုကျတာ မိုကျတီး